N'aka ekpe na echiche ziri ezi, gịnị kpatara na ọ gaghị enwe ike ịkọwapụta akụkụ ị nọ? - 1aviagem.com
Gara aga post: shoppingzụ ahịa na Ciudad Del Este bara uru? - Paraguay
Nkwupụta ozo: Ajụjụ ọnụ a na Brazil, kedu ka ahụmịhe nke mgbanwe? - Firenze - Italy
Edebere 2 izu gara aga site Römulo Lucena
N'oge na-adịbeghị anya na Brazil enwere ọtụtụ okwu banyere agha echere na echiche, n'etiti ndị na-eche "kachasị mma" megide ndị na-eche "karịa n'aka ekpe". Mana ị maara ihe okwu ndị a pụtara?
Tupu anyị amalite, ka anyị hụ ebe okwu ndị a sitere.
Mmalite nke aka ekpe na aka nri.
Na narị afọ nke 18 (XNUMXth) enwere ndị eze na ndị eze. Ha we buru eze, okwu-ha bu kwa iwu. Okwu eze bara uru karịa iwu gọọmenti etiti. N'ezie, ha na-atụ ụtụ isi, ma mgbe eze chere na ụtụ isi dị ala, ọ sịrị: ha na-ekpuchikwu ụtụ! Ọzọkwa, a na-atụkwu ụtụ isi. Ọ bụrụ n’ịkwụghị ụgwọ, ị ga-anwụ. N’ikwu ya, otu onye nwụrụ n’ihi ịkwụ ụtụ isi. N'ezie, ọ bụ ebe a ka okwu si apụta si. "Utetụ ụtụ eze nyere iwu". Do nweghị nhọrọ nke ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ ịkwụghị ụgwọ, a na-amanye gị ka ịkwụ ụgwọ.
Ma enwere ndị na-enweghị mmasị n’iwu eze na oke. Ha kpọrọ onwe ha ndị nnwere onwe. Ndi nwere ikike = Nnwere onwe gọọmentị. (ha ga - amachi ikike eze ka ha rụọ ọrụ nke ọma).
Ma eze ọ bụla nwere ndị enyi ya, ọ dị mma?! Ndị enyi eze chere na nke a adịghị njọ. Kedu ihe ị chere, ndị mgbapụta a chọrọ ụfọdụ ikike? Okwu eze bụ iwu ma onye ọ bụla ga-edebe iwu. Ọ ka mma ịhapụ ya ka ọ dị, ọdịnala ka mma, ihe adịla mgbe ọ bụla otu a, ọ ka mma na ha na-aga n’ihu n’ọrụ, ma ọ bụghị na alaeze a ga-abụzi ọrịa na-efe efe. A na-akpọ ndị a Conservative. Ha chọrọ ichebe ọdịnala na ike eze.
Ya mere, ugbu a, chee tebụl. Ebe eze nọ n’etiti. Conservatives anọdụ ala ikike ha. Na ya LEFT nọ ọdụ nke Liberals.
Ma mgbe ahụ e gburu eze! Gbuo gburu n'ezie. Ma ugbu a, ndị a ga-eme mkparịta ụka iji chọta ihe ga-enyere ibe ha aka. N'elu aka ekpe bu ndi nwere onwe ha. N'ime otu a anyị tinyere n'otu achicha: ndị ọrụ na ndi oru ahia, ndi ohuru na ndi ozo. (bourgeois).
N'aka aka nri anyị tinyekwara otu achicha: Ndị enyi nke eze, ndị ụkọchukwu (ndị ụka) na ndị ama ama (ndị ọchịagha), Ha chọrọ idobe ihe dịka ha dị. (N’ezie, ha nwere ugwu). Ma ugbu a, ha enweghịzi eze na ha ga-enwe mkparịta ụka na nzuko omebe iwu. Otu ìgwè ahụ nọdụrụ n’aka nri na aka ekpe.
Knewnye maara na otu ụbọchị anyị hụrụ ndị ọchụnta ego na ndị ọrụ n'otu akụkụ, na-ebuso ndị na-achọghị ịlụ agha?
Enwere ike ikwu na ka oge na-aga ndị na-enwere onwe ha emeriala n'ọgụ karịrị nke ndị na-echekwa echekwa. Maka nke a, anyị bịara ike mmadụ na ikeketeorie.
Yabụ ugbu a, ndị otu ahụ na-abụbu ndị aka ekpe wee malite isiokwu ọzọ na ndị omekome akụ na ụba ọhụrụ. Ọhụrụ aka ekpe na aka ekpe.
Otu akụkụ dị n'akụkụ aka ekpe nke eriri ahụ bụ ndị ọrụ ahụ. Na ha ga-ekwenyere n'akụkụ aka nri ọhụrụ. Ha chọrọ ọnọdụ ọrụ ka mma, njem na-agwụ ike. Ngwá ọrụ ka mma, ndị na-ebugharị ebugharị, (PPE) wdg.
N'akụkụ aka nri nke eriri ahụ, ugbu a enwere ndị nwe ụlọ ọrụ na ndị ọchụ nta ego. Ihe kpatara ya: “debe ihe dika odi ha”. O riri ha nnukwu uru ma mekwaa obere ego.
Yabụ n'etiti anyị niile nwere echiche ndị ọzọ na ndị ọzọ na-eme ihe nkiri na-ebilite n'oge, dịka ndị otu, ndị nnọchi gọọmentị (ndị na-achịkwa), ndị asọmpi azụmaahịa, yabụ anyị na-esi n'aka nri gaa n'aka ekpe, mgbe ụfọdụ n'ụzọ ma ọ bụ ọzọ. Ugbu a onye nọ n'aka ekpe na-aga n'aka nri, ugbu a onye nọ n'aka nri na-aga n'aka ekpe.
Ya mere, na mbipụta ọhụụ akụ na ụba ọ bụla bilitere, ndị na-eme ihe nkiri na-abanye na echiche ọhụrụ na-abanye gburugburu a.
Ọ bụ ya mere m ji kwuo na ọ gaghị ekwe omume ịkọwapụta ebe ị nọ n'akụkụ ya. N’ihi na ọ ga-adabere n’echiche gị, otú i si ele onye ị na-agwa okwu anya, oleekwa n’oge usoro ihe ahụ ị nọ. Dịka ọmụmaatụ, naanị na ederede a dị mkpirikpi ka onye ọchụnta ego nọworo n'aka ekpe, wee tụgharịa n'aka nri, dabere na onye na-ele ya anya, ọ nwere ike nọrọ n'etiti! (n’agbata onye asọmpi na onye ọrụ ebe asọmpi na-elele onye ọrụ nke ọchụnta ego nke mbụ iburu ụlọ ọrụ ya).
N'ebe a, anwara m ịbịaru nso usoro akụ na ụba nke nweelarị ọtụtụ ajụjụ! Cheedị ma ọ bụrụ na ị gwakọta nnwere onwe mmadụ na ikike mmadụ, ọ ga-aghọ ọgba aghara.
Na nchịkọta dị nkenke, m ga-ekwu (taa) na ọ bụrụ na ị na-akwado nnabata steeti ka ukwuu na akụnụba na ị bụ onye aka ekpe (narị afọ nke XNUMX), mana ọ bụrụ na ị na-eche na gọọmentị (Steeti) agaghị etinye ọnụ na nke a hapụkwara ndị ọchụnta ego na ndị ọrụ naanị ị ka toro eto. (n'oge gara aga na narị afọ nke XNUMX ọ ga-abụ emesapụ aka).
Ugbu a, Coronavirus apụta! Ọtụtụ ndị mmadụ na - agbanwe obi ha ma na - eche na ee, steeti kwesịrị itinye aka na akụ na ụba ma nyere ndị na - erughị ike ee, yabụ onye ahụ agbanweela na nchekwa mmụọ (n'aka ekpe), na nke ahụ n'otu oge ahụ. Gọọmentị na-ekwu na ọ gaghị eme ihe ọ bụla, ọ bụ obere aka. Laghachi n’ọrụ, ndi nile ma rapu m!
N'aka ozo, Gọọmentị n’onwe ya na-aga n’aka nri nke usoro ahụ. (Ọ na-eme ka uche dị na obere okwu steeti). Mana emesia ọ na-ewere ọnọdụ nke Steeti (Gọọmentị) wee kwuo otu a ga-ekesaa nkpuchi ndị isi, nyocha COVID-19 yana mmụba na mmepụta chloroquine. Mgbe ahụ gọọmentị na-akwaga n'ahịrị ekpe ma anyị nwere ọnọdụ etiti karịa! O lee kwa gi? Hapu nkowa nke aka ekpe na aka nri nke ugbu a abaghi ​​uru ozo maka otutu!
Ọ dịkwa njọ ma nwee ahụike ka ị gbanwee obi gị ka oge na-aga na-echeghị eche ma aka ekpe gị ma ọ bụ aka nri.
Na ebe a, m na-ejedebe mkparịta ụka a na-atụ anya iwebata obere akụkọ ihe mere eme ma mee ka onye na-agụ ya chee na e nwere echiche ndị ọzọ bara uru na-abụghị nke ya dịkwa mma! Aha nke a bụ iche-iche. Ọ bụrụ na nkọwa ahụ masịrị gị ma chọọ inyere blog a aka, ana m arịọ gị ka ị soro anyị na bọtịnụ na-acha ọbara ọbara dị n'aka nri:
- Chei, ya na Rômulo acha ọbara ọbara, yabụ ị na-achọ ugbu a! (Ọ bụ n'ihi na enwere m nkụchi; ya mere, ọ bụghị obere ọkụ ọkụ
Ma ọ bụrụ na ị ka nwere obere mgbagwoju anya, soro vidiyo na-akọwa m nke m hụrụ na Youtube na ọwa Plano Piloto. Emechara nke ọma na m na-ekerịta ya kama ịme vidiyo site na ọkọ.
akụkọ ihe mere eme nkwuputa n'aka nri ekpe ala ọchịchị emesapụ